· 8 months ago ·13 Comments
ဥဩစာစဥ် အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၁၈) ထုတ်ဝေ
မေလ(၂၀)ရက်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ထားဝယ်
Cuckoo Newsletter Vol(1), No.(18)
Like – 8.3K Share – 1347
2021-05-22 at 8:03 AM
Nway Oo Kaung Htet says:
2021-05-22 at 8:32 AM
ပြောချင်တာက ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆွဲပီးမှ ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ပေါ်လာမှာပေါ့ ဒါဆိုနောက်တစ်နှစ်လောက် ဆက်လုပ်ရမယ့်သဘောပေါ့
Lwin T Ne says:
2021-05-22 at 8:33 AM
ဘာလို့ အသစ်ရေးဆွဲမှာလဲ မူကြမ်းရှိတာကို modify လုပ်တာပိုမြန်တယ်လေ မဟုတ်ဘူးလား
2021-05-22 at 8:34 AM
ရွာတစ်ခုမှာ ခွေးအကောင်ရေ ငါးဆယ်ရှိတယ်…တွေ့ရာမြင်ရာလစ်သလိုလိုက်ဆွဲတယ်..ဒါနဲ့ .လူတစုက
ခွေးလိုက်ရိုက်တယ်….ခွေးတွေပြန်ဟောင်ပြန်ကိုက်နဲ့ သူအဖော်တွေပါဝိုင်းလာတယ်…လူနှစ်စု ဖြစ်လာတော့ ဝိုင်းဟောင်ဝိုင်းကိုက်အကောင်ရေဟာ နှစ်ဆယ်ငါးကောင်စီထက်ဝက်ခွဲ လိုက်ဆွဲတယ်…ဒီလိုနဲ့ ခွေးလိုက်ရိုက်သူ အစုအဖွဲ့တွေ တိုးလာတယ် ဆယ်ဖွဲ ခွဲ လိုက်ရိုက်ချိန်မှာ သူတို့ အင်မတန်အင်အားနည်းသွားပြီ….ငါးကောင်နဲ့ အတင်းအကန်ဟောင်နေတယ်…အဲ့တော့ တစ်ရွာလုံးသဘောပေါက်ပြီး နေရာမလပ် လိုက်ရိုက်တယ်… ဘာခံနိုင်မှာလဲ…အဆွယ်မြမြခွေးတွေ ဆယ်လေး တစ်လေးနဲ့ အာဖြဲ ခံရတာပဲ….
အရမ်းဆိုးတဲ့ ခွေး အနာခံပြီးသူ့ပါးစပ်ထဲလက်ထည့်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်နဲ့ အားဖြဲ ကြည့်…ရဲရဲတင်းတင်းလုပ်ကြည့် နောက် ခင်ဗျားမြင်ရင် ပြေးလိမ့်မယ်….မပြေးရင် အမြှီးနှံ့ ပြလိမ့်မယ်….
တရွာလုံး လိုက်ဖို့ ရိုက်ဖို့ တော့လိုတယ်….
2021-05-22 at 8:42 AM
အခု​လေတပ်ပါလာပြီဆို​တော့နဝတ​ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဝင်းကစပြီး ​လေတပ်​ခေါင်း​ဆောင်​တွေကို Social Punishment လုပ်ရမည်။ ​နဝတ​ခေတ်လေတပ်ကဗိုလ်ချုပ်သိန်းဝင်းတို့​ရေတပ်ကဗိုလ်ချုပ်သန်းညွန့်တို့ဆိုတာဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့လက်ကိုင်တုတ်​တွေပါ။ သူတို့ကပြည်သူပိုင်သည့်သယံဇာတ​၊ နိုင်ငံပိုင်ပါမစ်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးသူတို့မိသားစု​တွေကကျိကျိတက်ချမ်းသာပါတယ်။ သူတို့​မြေး​တွေကျ​တော့နိုင်ငံခြားပို့ပြီးပြည်သူ​တွေကျ​တော့​လေယာဥ်နှင့်ဗုံးကျဲ​နေတာလုံးဝမခံနိုင်ပါဘူး။ သူတို့မိသားစု​တွေကိုထိမှသိမှာပါ။ သူတို့ကသူခိုး ဓါးမြ လူသတ်သမား​တွေပါ။
Ko Zaw Paing says:
2021-05-22 at 9:54 AM
အာ့ ၈လကြားမှာ CDMသမားဒေက 🙂
2021-05-22 at 10:05 AM
Nooooooo 👎 8လ
၈ လ အတွင်း စကစကိုဆန်ကျင်တဲ့
ပြည်သူတွေ မရှိတော့ရင်၊ CDM တွေ
မရှ်ိတော့ရင် NUG ဘယ်ဘိုလုပ်မှာ
ရေးလို့တမျိုးမထင်နဲ့ ၊ ကျွန်တော်
ဒလန် မဟုတ် ၊ မြေပြင်မှာလက်တွေ့
Yan Lin Khant says:
2021-05-22 at 10:43 AM
အေးပါ ၈လဆိုတော့ နောက်ထပ်ပြည်သူတွေ ထပ်သေဦးဆိုတဲ့သဘော…လူငယ်တွေလဲ တောခိုပြီး တောထဲမှာ သောင်တင်ဦးဆိာတဲ့သဘော…
2021-05-22 at 11:32 AM
2021-05-23 at 2:46 PM
မြဝတီကိုမဖြစ်မနေကြည့်ခိုင်းနေတဲ့ စစ်ခွေးတွေဆီကို အရောက်ပို့ပေးရမှာ